प्रायः महिलाहरु सुनका गहना भनेपछि भुतुक्कै किन! :: Setopati
अच्युत शाली घिमिरे फागुन २३
विशेषत: किन सुनको महत्व यति धेरै राख्छन् नेपाली नारीहरुले? के यो प्रवृत्तिको निरन्तरता हो वा बद्लिँदो परिवेशको आवश्यकता?
वा 'लाउन सक्नेले लाउँछन् त नलाउनेलाई केको टेन्सन?' भन्दै गरिने फुर्तिलो रवाफीपन हो? पुँजीवादी चालचलन र देखावटी कृत्रिमता तर्फ ढल्किदै गरेको हाम्रो यस्तो मानसिकताले भने हुने खाने र हुँदा खाने वर्ग बीचको खाडललाई झन् गहिरो बनाउँदै लगेको तर्फ पनि ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने जरुरी छ।
किन्न जति नै कोशिश गर्दा पनि नसेकेपछि छर-छिमेकीको गहना सापटी मागेरै भए पनि पहिरिएर जाने चलन नौलो होइन। त्यो पनि सम्भव नभएमा 'हराएमा गम छैन, सक्कलीभन्दा कम छैन' भन्दै नक्कली सुनका गहना नै भए पनि लाएर जानेहरुको जमात ठूलो छ।
'विवाहमा कोसँग कस्तो नाता छ? शिष्टाचार कस्तो छ? बोली वचन र मुस्कान कस्तो छ? दुलाहा दुलहीको पढाइ कस्तो छ? सम्बन्ध कस्तो छ? खानेकुरा कस्तो छ?' यी यावत कुराहरुमा बेपरवाही रहेर नारीहरु मात्र गहनालाई जोडेर एकअर्काको मौन प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन्।
'फलानोको श्रीमतीले यति तोला लाकी छे' भन्दै श्रीमानसँग गुनासो नै गर्छन्।
'त्यसको त घाँटी नै लत्रिसक्यो गह्रुंगो भएर, मेरो त जाबो आधी तोला' भन्दै अँध्यारो मन पनि बनाउँछे। पार्टी प्यालेसहरु विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी, तीज जस्ता कार्यक्रम गर्ने स्थलभन्दा पनि सुन प्रदर्शनी गर्ने स्थलका रुपमा परिचित हुँदैछन्।
सुनको प्रशंसा र मूल्य स्थापित गर्न बनाइएका उखानहरुले पनि दुनियाँको नजर लोभ्याइरहन्छ। 'अकबरी सुनलाई कसी लाउन पर्दैन। लंकामा सुन छ कान मेरो बुच्चै। सुनमा सुगन्ध।'
धेरैले भन्ने गरेको सुन्ने गर्छु 'सुन लाउनु आधुनिक परिवेशको उपज हो। हिजोका शोषित पीडित भएका नारीहरुलाई सुनको गन्धै थाहा हुन दिइएन। आज आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै कमाइले सजिएर हिंड्दा, तिम्लाई केको चासो र दुखेसो?'
यसलाई हलुका रुपले स्विकार गर्दै जाने र भोलि हुर्किने बालबच्चाका लागि घर पाठशाला हुनुको साट्टो 'कर्पोरेट हाउस' र 'फेसन स्टोर' भयो भने, के सिक्छ त्यो काँचो दिमागले? यसतर्फ पनि समय मै होस पुर्याउनु पर्ने स्थिति छ।
हिजो जनयुद्धको मैदानमा 'हुनुपर्छ चमेली सबैजना बराबर' भन्दै नारा घन्काउनेहरु नै आज वर्गीय भिन्नता निमत्याउने कार्यक्रमहरुको साँची बसेर सुन कै लागि दलाल पुँजीवादका अघि घुँडा टेकेका घटनाहरुले मनमा चिसो पस्छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २३, २०७७, ११:२२:००